Amboary ny iPad (II): iPad 3 Front Panel | Vaovao IPhone
Matetika ny vaky vera an'ny iPad no vaky. Izy io dia iray amin'ireo fitaovana ankafizin'ny ankizy kely ao an-trano ary atahorana izany, ankoatr'izay ny tsirairay amintsika dia tsy afaka amin'ny lozam-pifamoivoizana izay mahatonga ny takelaka voalohany an'ny iPad hifarana vaky. Tsy asa mora ny manolo an'ity tontonana voalohany ity amin'ny hafa, fa raha mahatsapa fa mahavita azy ianao dia handika ny torolàlana voalohany an'ny iFixit izay manazava tsikelikely ny fomba fanesorana ny tontonana anoloana ary soloina vaovao.
Rehefa maneho hevitra momba ny anay izahay torolàlana teo aloha hanamboarana ny bokotra HomeIty dia fomba iray izay tsy manamarina ny fiantohana ny fitaovanao ary tsy misy risika, koa izay rehetra miasa eo ambanin'ny andraikiny dia mandika torolàlana fotsiny izahay manandrana hanamora ny raharaha ho anao. Actualidad iPad dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana ara-batana amin'ny iPad-nao.
1 Fitaovana ilaina
Panel eo aloha IPad 3
Ireo fitaovana rehetra ireo dia azo vidiana amin'ny tranokala iFixit na amin'ny magazay manokana.
Raha simba be ilay efijery soloinao dia sarony fonosana mazava izay hametahana ireo sombin-javatra mandritra ny fizotrany ary hanamora ny zavatra anao.
Manafana ny iOpener amin'ny heriny iray minitra. Ny iOpener dia hanasarahana ny kasety adhesive manodidina ny efijery iPad. Ny iOpener dia tsy azo hafanaina imbetsaka misesy, atolotra anao ny hiandry roa minitra alohan'ny hamerenany azy.
Mametraka Guitar iFixit iray hafa izahay eo amin'ny farany ambany ankavanan'ny iPad mba hisorohana ny fametahana ilay dity ary averinay ao anaty microwave ny iOpener ary apetrakay eo an-tampon'ny iPad, misy ilay fakantsary.
Miaraka amin'ny tendron'ny a spudger (totohondry), esorinay ny kasety adhesive izay manarona ny mpampitohy ny tariby kofehy LCD.
Atsanganay ny kapila fihazonana amin'ny mpampitohy tariby ZIF sary ny efijery LCD anay. Misintona ny tariby amin'ny rantsantanantsika isika.
Tsy mikasika ny eo alohan'ny efijery, atsanganay ny tontonana aloha hahafahana miasa.
Raha ilaina, qMampiasainay ilay kasety adhesive mitazona ny tariby vita amin'ny digitizer. Asandratray ny kapila mitazona ny kasety ZIF amin'ny tariby digitizer.
Miala amin'ny spudger (awl) izahay dia mamaha ny adhesive eo ambanin'ny tariby misy ny digitizer. Izahay dia misintona ny tariby mandra-pivoakany avy ao amin'ny faladiany anatiny.
Miaraka amin'ny totohondry indray, esorinay hiverina ny tariby digitizer avela maimaimpoana ny anoloana ny iPad. Esorinay ny tontonana eo aloha.
Azonao atao izao ny manolo ilay tontonana eo aloha tapaka miaraka amin'ilay vaovao manaraka ny dingana rehetra ao amin'ity boky ity.
Loharano - iFixit
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Amboary ny iPad (II): iPad 3 Front Panel
TAMIN'NY APRILONY TSARA INDRINDRA NY FIVORIAMBE IREO LOHA HEVITRA SY NY LCD IZAY OLANA, ARY VOLA IZAO REHEFA Miezaka ny manavao ny fitaovana amin'ny iOS IOS7 dia mahazo fihenjanana eo anelanelan'ny famerenana amin'ny laoniny ARY TSY MISY IZANY, ARAKA NY serivisy TENY AHO IZAY ZAVATRA IZAO FA REHEFA INSTASA NY IOS dia manamarina ny fahasimbana ary raha toa ka tsy mahomby izany dia voapitsoka, rehefa maty ny IPAD, dia misy mahalala ny vahaolana ho an'ity dia ho mpanampy lehibe, misaotra MANDROSO IANAO. NY MAILIKO NO KRLOS805@GMAIL.COM
valentina21r dia hoy izy:
Salama maraina dia nataoko niova ny efijery ary tonga lafatra ny zava-drehetra, ny efijery mikasika ihany no mandeha, inona no mety ho zava-mitranga ???
Mamaly an'i valentina21r
Stickers for Whatsapp, scam iray hafa ao amin'ny App Store